Global Voices teny Malagasy » Tsy Voasakana Ny Fivarotantena. Na Ao Anatin’i Tajikistan Fatra-Pitahiry Ny Nentin-drazana Aza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Oktobra 2015 20:56 GMT 1	 · Mpanoratra Abdulfattoh Shafiev Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Tajikistan, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Atodik'i Tajikistan any amin'ny fivarotantena ny hazavàna – sa ve ? Sary Wikipedia ahitàna ny jiro menan'ny distrika ao Amsterdam. Ho sary fanaingoana fotsiny ihany.
Tamin'ny herinandro lasa, lohalaharana tao anaty fandaharam-potoanan'i Tajikistana fatra-pifikitra amin'ny nentin-drazana ny resaka firaisana ara-nofo satria noravan'ny governemanta ireo mpivarotena, raha sady nitondra fahataitairana sy tsy fankatoavana kosa ny fisian'ilay fivarotana voalohany tety anaty aterineto tao amin'ny firenena nivarotra ireo fitaovana fampiasà amin'ny filàn'ny nofo.
Araka ny fanitsiana vaovao  natao tamin'ny lalàna momba ny fivarotantena, izay mpivarotena tratra manitsakitsaka fanindroany ny lalàna dia hahazo sazy goavana kokoa sy mety hiatrika fampidirana am-ponja hatramin'ny roa herinandro.
Efa tamin'ny taona lasa no nisy ny fandravàn'ny governemanta ireo mpivarotena. Nandritry ny ririnina sy ny lohataona 2014, nanaovan'ny manampahefana bemidina ireo trano fandihizana amin'ny alina, ireo trano fisakafoanana sy fisotroana, ny hotely, ary ireo jiro mena mba hikarohana ireo mpivarotena, tamin'ny fanomezana henatra ireo tratra voasambotr'izy ireo.
Ireo mediam-panjakana tsy ara-pivavahana, mpitolona, dia nilaza koa  tamin'ity taona ity fa nitafy hijabs ireo mpivarotena mba hanafenana ny asan'izy ireo, nefa tsy nanome porofo maharesy lahatra tamin'ny fiampangàny. Araka ny lalàna Tajik dia tsy azo saziana ireo mpividy fahafinaretana, na dia manao tsolotra aza amin'ny ankapobeny ny ankamaroan'izy ireo mba tsy hahitàna ny endriny hiseho anaty vaovao amin'ny fahitalavitra na any anatin'ny tranonkalan'ny ministeran'ny atitany.
Miaraka amin'ny tsy fanjarian'ilay fanentanana ny vahoaka hanohitra ny asa fivarotantena, mizarazara ireo Tajik mpampiasa aterineto amin'ny hoe mety hitondra fiovàna sa tsia amin'ilay toedraharaha ny fametrahana sazy faran'izay henjana.
Tonga hatramin'ny hatezerana faratampony ireo fanehoankevitra momba ilay lohahevitra :
Tokony hovonoina mifanaraka amin'ny lalàna Sharia ry zareo. Raha tsy izany, dia hiverina amin'ny asa ratsiny indray afaka roa herinandro.
…ka hatramin'ny antso fitserana sy fahatakàrana :
Tsy avy any amin'ny fiainana tsara kosa izy ireny no nandeha nankany amin'ny fiainana makorely.
Ny fanehoankevitra sasany, na dia ireo izay mamely mafy an'ireo mpivarotena aza, dia mamadika ilay fanjakan-dehilahy iraisan'ny rehetra ho lasa fanehoankevitra aterineto ao Tajikistan:
Raha nisy asa tsara aty Tajikistan, tsy misy na iray aza olona handeha hanao makorelina, azo antoka ny amin'izay. Samy maniry ny hanana fiainana tsaratsara kokoa ny tsirairay. Ny olona nahazo fanabeazana tsara tsy afaka mahita asa aminà karama sahaza, koa fomba ahoana no hahitana asa ho an'ireo tsy nandia fianarana ? Ireo tovovavy miteny hoe, aleon-dry zareo manasa kabone — mba vava ny anareo. Raha ianareo no teo amin'ny toeran'ireny vehivavy ireny, mety ho nentin'ny tongotrareo ho any an-toerana hafa ihany koa ianareo mba hahita izay haràpaka sy mba hitafy tsara.
Ny sasany mbola manao fanamby amin'ireo solombavambahoaka mba hahita ireo esoeso ao anatin'ilay lalàna vao avy nolanian-dry zareo :
Fanontaniana iray avy amiko – ahoana no tokony hiasàn'ireny vehivavy ireny handoavany ilay sazy ara-bola?
Ho setrin'io lalàna io, nakarin'ireo mpivarotena ny saran'ny tolotr'izy ireo….
Zara raha misy ho amidy
Niaina fanamby henjana ara-toekarena sy sosialy i Tajikistan hatramin'ny nahazoany ny fahaleovantenany tamin'ny Firaisana Sovietika sy ny fipoahan'ny ady an-trano izay nandravarava nanomboka ny 1992 hatramin'ny 1997. Nanampy namotika ilay firenena ny kolikoly niely patrana, ny haratsiam-pitantanana, ny fitsitokotokoana ary ny tsy fahampian'ny fifehezana araka ny lalàna, firenena izay miankina betsaka amin'ny volan'ireo mpila ravinahitra manerana izao tontolo izao alefany mody mankany an-tanindrazany.
Nanjo ny lehibe ara-politika sy toekarena tao Rosia ihany koa ny fotoan-tsarotra, niteraka dom-berina. Andro vitsy monja taorian'ny nilazàna an'i  Tajikistan ho firenena marefo indrindra niharan'ny hanoanana tany Azia taorian'ny naharavàn'ny Firaisana Sovietika.
Sarotsarotra kokoa ny toedraharaha ho an'ireo vehivavy sy ankizy, izay nandao an'i Rosia ny vadiny ary avy eo mazàna tsy hita nanjavona, indraindray miverina manambady indray.
Sarotra ho an'ny vehivavy efa nanambady ny hahazo vady indray, satria ny ankamaroan'ireo lehilahy ao anatin'ity repoblika izay miozolmana no betsaka ao aminy ity, dia mitaky hatrany ny maha-virijiny alohan'ny hidirana ao anaty tokantrano. Nitondra mihitsy aza io ho amin'ny fitomboan'ny fanaovana fitsirihana ny maha-virijiny , naroso ho toy ny fototry ny tokantrano sambatra.
Nitarika ireo reny tanora sasany ho amin'ny famonoana tena  ny hadisoam-panantenana ara-toekarena tao amin'ny firenena, raha ny sasany kosa nisafidy ny hivaro-tena, na izany eo an-toerana na mivoaka any Rosia.
Hazavain'i  Dilovar Munavvarov, mpampiasa Facebook, ny anton'ny famonjàna ireo mpivarotena tsy hahasakana na inona na inona ary hampitombo aza ny zava-mitatao efa goavana atrehan-dry zareo :
TSIA. Vao mainka hanaratsy ny toedraharaha ny fampiakarana ny sazy ara-bola sy ny fampidirana am-ponja azy ireo ary mety hitondra ireto vokatra manaraka ireto: (1) Mba handosirana ny fisamborana dia hitady toerana lavitr'andriana ireo mpivarotena sy ny mpanjifa azy, izay ny vokany dia hampidi-doza an'ireo vehivavy ireo, satria mety hiharam-bono ry zareo, sns…; (2) Hiezaka hamarana haingana ny dingana ny tsirairay. Tsy hanam-potoana firy ry zareo hieritreretana mikasika izay ho fiarovana ny tenany amin'ny aretina mifindra; (3) kianja misimisy kokoa ho an'ireo polisy mba hanaovany ny fanamparam-pahefany, izany hoe ny daroka, ny herisetra, ny tsolotra ary ny fandrahonana sns […] miampy olona tazonina sy ampiharana herisetra mety ho ampangaina ho nivaro-tena ; (4) Tsy dia misy fahasahiana loatra ho an'ireo mpivarotena sy ny mpanjifan-dry zareo hitady ny rariny sy fiarovana raha sendra misy herisetra manjo.
Ahoana no hitarainanao ho voadaroky ny polisy na nodarohan'ny mpanjifa, raha ny vokany, ianao indray no handoa sazy ara-bola 200 dolara amerikana na 15 andro any am-ponja?
Nifanojo tamin'ny fanamelohana ny fanokafana tsy ela akory an'ilay pejy Facebook fivarotana fitaovana ho an'ny filàn'ny nofo  tao amin'ny firenena ilay lalàna manenjika ny asa fivarotantena. Hatreo dia nakatona ny pejin'ilay toeram-pivarotana taorian'ny nanaitairany fahalinana sy fanakianana.
Vehivavy iray, izay nirehetan'ny kiana noho ny nanoratany fomba fijery mankasitraka ny asan'ilay toeram-pivarotana no namintina hoe :
Ankehitriny dia toa tahàka ny mandefa fangatahana hiditra ho namako noho ny fomba fijeriko mankasitraka [ilay toeram-pivarotana] ireo olona niady hevitra momba ity lohahevitra ity 🙂 Tiavo ny vadinareo, ary minamàna aminy [ho solon'izay]!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/19/75716/
 fanitsiana vaovao: http://www.ozodi.org/content/tajik-parliamel-allow-arrest-of-prostitutes/27307441.html
 nilaza koa: http://www.eurasianet.org/node/72816
 nilazàna an'i: https://www.concern.net/sites/default/files/media/resource/global_hunger_index_2015_-_full_report.pdf
 fanaovana fitsirihana ny maha-virijiny: http://www.eurasianet.org/node/73356
 famonoana tena: https://globalvoices.org/2015/09/26/maternal-infanticides-attempted-suicides-highlight-heavy-burden-on-tajik-women/
 fivarotana fitaovana ho an'ny filàn'ny nofo: http://www.ozodi.org/content/the-first-internet-sex-shop-opened-in-tajikistan/27299996.html
 namintina hoe : https://www.facebook.com/groups/Midushanbintsi/permalink/1655349934740470/?comment_id=1655440604731403&offset=0&total_comments=80&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D